Show All Most Popular Asia Beverage Carton Price
Asia Beverage Carton Price
No.19, 4Za(2-Kha), Corner Of Baho Road and Nilar Street, 13 Qtr, Yangon, MM Hlaing
Asia Cup Passion - 230ml (1 Carton 24pcs)
FDA ခွင့်ပြု .ချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး vitamin(9)မျိုး ပါဝင်သည်။PH7 ရေသန့်ကိုအသုံးပြု .ပြီးခေတ်မီ သော Computer controlling systemသုံးစက်များဖြင့်ထုတ် လုပ်ထားသောကြောင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ပါရှိသည်။ ဆေးသကြားလုံးဝမပါဝင်ပဲ သကြားသန့်ဖြင့်ထုတ်လုပ် ထားသည်။
FDA ခြင့္ၿပဳ .ခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး vitamin(9)မ်ိဳး ပါ၀င္သည္။PH7 ေရသန့္ကိုအသံုးၿပဳ .ၿပီးေခတ္မီ ေသာ Computer controlling systemသံုးစက္မ်ားၿဖင့္ထုတ္ လုပ္ထားေသာေႀကာင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ပါရွိသည္။ ေဆးသႀကားလံုး၀မပါ၀င္ပဲ သႀကားသန့္ၿဖင့္ထုတ္လုပ္ ထား
Asia Water - 0.3liter (1 Carton 12pcs)
Fully Automatic Control Syatem (RO)ရေသန့်စစင်စနစ်ကို အသုံးပြု .ကာOzone and UVတိုဖြင့်စနစ်တကျသန့်စင်ပြီး အကောင်းဆုံးရေအရင်းအမြစ်မှရယူထားသော ရေသန့်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု . ISO and HACCPလက်မှတ်ရရှိထား သည်။
Fully Automatic Control Syatem (RO)ေရသန့္စစင္စနစ္ကို အသံုးၿပဳ .ကာOzone and UVတိုၿဖင့္စနစ္တက်သန့္စင္ၿပီး အေကာင္းဆံုးေရအရင္းအၿမစ္မွရယူထားေသာ ေရသန့္ၿဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ . ISO and HACCPလက္မွတ္ရရွိထား သည္။
Asia Delight Orange+Grapefruit - 250ml (1 Carton 12pcs)
FDA ခွင့်ပြု .ချက်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားး vitaminC, Vitamin B1,B2 ဓာတ်များကိုရရှိစေပါသည်။ PH7 ရေသန့်ကို အသုံးပြု .ပြီးခေတ်မီ သော Computer controlling systemသုံးစက်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ပါရှိသည်။ ဆေးသကြားလုံးဝမပါဝင်ပဲ သကြားသန့်ဖြင့်ထုတ်လုပ် ထားသည်။လှပသစ်လွင်တောက်ပသောဘူးဒီဇိုင်းအပြင် ထူးခြားချိုမြိန်သောအသီးအရသာများကိုတမူထူးခြားစွာပေါင်း စပ်ထားပါသည်။
FDA ခြင့္ၿပဳ .ခ်က္ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားး vitaminC, Vitamin B1,B2 ဓာတ္မ်ားကိုရရွိေစပါသည္။ PH7 ေရသန့္ကို အသံုးၿပဳ .ၿပီးေခတ္မီ ေသာ C
Vito Soy Milk Plain -180ml (1 Carton 48pcs)
ကနေဒါနိုင်ငံမှ GradeAအဆင့်ပဲကိုအသုံးပြု့ထားပြီးNew Zealand မှ ပထမတန်းစား နို့မှူန့်ကိုသာအသုံးပြု့ထားသည်။နောက်ဆုံးပေါ် Swedichနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ UHT စနစ်ကိုအသုံး ပြု့ထားသောကြောင့် သဘာဝအရသာပျက်ပြယ်ချင်းခြင်းမရှိပဲ ပဲနို့ အရသာစစ်စစ်ကိုသာ ရရှိစေသည်။ကုန်ကြမ်းအားလုံးသည်FDA လက်မှတ်ရရှိထားသည်အပြင် ISO and HACCPလက်မှတ်များရရှိ ထားပါသည်။
ကေနဒါနိုင္ငံမွ GradeAအဆင့္ပဲကိုအသံုးၿပဳ ့ထားၿပီးNew Zealand မွ ပထမတန္းစား နို ့မွူန္ ့ကိုသာအသံုးၿပဳ ့ထားသည္။ေနာက္ဆံုးေပါ္ Swedichနည္းပညာၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။
Asia Delight Lychee+Pomogranate - 250ml (1 Carton 12pcs)
Asia Water -5liter
Dpop Lime - 350ml (1 Carton 12pcs)
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော FDA လက်မှတ်ရအရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ Automatic Control System စက်ဖြင့် စနစ်တကျထုတ်လုပ်ထားသောအချို ရည်ဖြစ်ပါ သည်။ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မူပြေပျောက်စေပြီး vitaminC ပြည့်ဝစွာပါ ဝင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးတွက်သင့်တော်ပါသည်။
က်န္းမာေရးနွင့္ ညိီညြတ္ေသာ FDA လက္မွတ္ရအရည္အေသြးၿမင့္ ကုန္ႀကမ္းၿဖင့္က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ Automatic Control System စက္ၿဖင့္ စနစ္တက်ထုတ္လုပ္ထားေသာအခ်ိဳ ရည္ၿဖစ္ပါ သည္။ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မူေၿပေပ်ာက္ေစၿပီး vitaminC ၿပည့္၀စြာပါ ၀င္ေသာေႀကာင့္
Asia Clip Orange - 250ml (1 Carton 24pcs)
Asia Cup Orange - 230ml (1 Carton 24pcs)
Asia Cup Power C - 230ml (1 Carton 24pcs)
Asia Clip Passion - 250ml (1 Carton 24pcs)
Asia Clip Lichee - 250ml (1 Carton 24pcs)
Asia Clip Tamarind - 250ml (1 Carton 24pcs)
Asia Fire Dragon Energy Drink - 250ml (1 Carton 24pcs)
FDA ခွင့်ပြု .ချက်အပြင် ISOလက်မှတ်ရUSAမှအရည်အသွေ ကောင်းကုန်ကြမ်းဖြင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကစနစ်တကျထုတ် လုပ်ထားသည်။လူတစ်ဦး၏Physical Performance and Mental Alertness ဖြစ်လာရန်လိုအပ်သည့် vitamin-B/ Niacin aminde/Inositol နှင့်Taurine ကဲ့သို့ အစားစားချင် စိတ်ဖြစ်စေစော ပစ္စည်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။
FDA ခြင့္ၿပဳ .ခ်က္အၿပင္ ISOလက္မွတ္ရUSAမွအရည္အေသြ ေကာင္းကုန္ႀကမ္းၿဖင့္က်ြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကစနစ္တက်ထုတ္ လုပ္ထားသည္။လူတစ္ဦး၏Physical Performance and Mental Alertness ၿဖစ္လာ၇န္လိုအပ္သည့္ vitamin-B/ Niacin
Yoshi Milk Strawberry - 200ml
နယူးဇီလန်မှနို .မုှုန့်ကိုအသုံးပြု့ပြီး ပရိုတင်းနှင့် ဗီတာမင်E အပြင်ဗီတာမင်C တို့ပါဝင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာဖွင့်ဖြို းပြီးအသား အရေလှပစေသည်။ဆွဲဆောင်မူရှိသောဗူးပုံစံဖြင့်ထုန်လုပ်ထားသည်။
နယူးဇီလန္မွနိုု .မုႈန္ ့ကိုအသံုးၿပဳ ့ၿပီး ပရိုတင္းနွင့္ ဗီတာမင္E အၿပင္ဗီတာမင္C တို့ပါ၀င္သည္ကိုယ္ခႏၶာဖြင့္ၿဖိဳ းၿပီးအသား အေရလွပေစသည္။ဆြဲေဆာင္မူရွိေသာဗူးပံုစံၿဖင့္ထုန္လုပ္ထားသည္။
Yoshi Milk Vanilla - 200ml
Lion Energy Drink - 250ml (1 Carton 24pcs)
ISO and HACCPလက်မှတ်များရရှိထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဦးနှောက် အတွက်လိုအပ်သောvitaminB3,B6,B12တို .ပါဝင်သောကြောင့် မောပန်းမူကိုပြေစေပြီးTaurineကြောင့် ကြွက်သားများနာကျဉ်ခြင်း မရှိသည့်အပြင် လနးဆန်းစေခြင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မူမူကိုပြေစေ ခြင်းစိတ်ဖိစီးမူလျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ISO and HACCPလက္မွတ္မ်ားရရွိထားၿပီး ခနၶာကိုယ္ႏွင့္ ဦးေနွာက္ အတြက္လိုအပ္ေသာvitaminB3,B6,B12တို .ပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ ေမာပန္းမူကိုေၿပေစၿပီးTaurineေႀကာင့္ ႀကြက္သားမ်ားနာက်ဥ္ၿခင္း မရွိသည့္အၿပင္ လနးဆန္းေစၿခင္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မူမူကိုေၿပေစ ၿ
Lion Pet - 250ml (1 Carton 12pcs)
Hydro+ ေရဓာတ္ျဖည့္အခ်ုိရည္ ရေဓာတ်ဖြည့်အချိုရည် - 400ml (1 Carton 12pcs)
သံပုရာအရသာဖြင့် လန်းဆန်းတ်ကြွမူပေးစွမ်းပြီး နေ့စဉ်လိုအပ် သော ရေနှင့် ဓာတ်ဆားဓာတ် ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရန် ဆိုဒီယမ် ပိုတတ်ဆီယမ်နှင့် ကလိုရိုက် ဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါ သည်။ကြာရှည်ခံပြု့လုပ်သော ဓာတုပစ္စည်း မပါဝင်ပါ။
သံပုရာအရသာၿဖင့္ လန္းဆန္းတ္ႀကြမူေပးစြမ္းၿပီး ေန ့စဥ္လိုအပ္ ေသာ ေရနွင့္ ဓာတ္ဆားဓာတ္ ကို ၿပန္လည္ၿဖည့္တင္းေပးရန္ ဆိုဒီယမ္ ပိုတတ္ဆီယမ္နွင့္ ကလိုရိဳက္ ဓာတ္မ်ား ႀကြယ္၀စြာပါ၀င္ပါ သည္။ႀကာရွည္ခံၿပဳ့လုပ္ေသာ ဓာတုပစၥည္း မပါ၀င္ပါ။
Sport X Isotonic Drink - 330ml (1 Carton 24pcs)
ဆုံးရှုံ းသွားသော ရေဓာတ်နှင့် ဓာတ်ဆားများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်း ပေးပြီး မူးမော်ခြင်း နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မူပြေပျောက်စေပါသည်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်သူများ ချွေးထွက်များတတ်သူများ နှင့်အားကစား သမားများတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
ဆံုးရွံဳ းသြားေသာ ေရဓာတ္နွင့္ ဓာတ္ဆားမ်ားကိုၿပန္လည္ၿဖည့္တင္း ေပးၿပီး မူးေမာ္ၿခင္း နွင့္ပင္ပန္းနြမ္းနယ္မူေၿပေပ်ာက္ေစပါသည္။ ေရဓာတ္ခမ္းေၿခာက္သူမ်ား ေခ်ြးထြက္မ်ားတတ္သူမ်ား နွင့္အားကစား သမားမ်ားတြက္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
V-Code Can Berry - 250ml (1 Carton 24pcs)
ကော်ဖီအရသာနှင့် စပါကလင် အရသာအပြင် ဘယ်ရီအရသာနှင့် စပါကလင် အရသာ ပံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ပေါင်းစပ်ထား သည့် အားဖြည့်အချိုရည်ဖြစ်သည်။ ISO HACCpလက်မှတ်များ ရရှိသည်။ vitamin B3,B6,B12 ပါဝင်ပြီး မောပန်းနွမ်းနယ်မူကို ပျောက်စေပြီး လန်းဆန်းမူသာမက ခွန်အားများ ဖြည့်ဆည်းပေးပါသည်။
ေကာ္ဖီအရသာနွင့္ စပါကလင္ အရသာအၿပင္ ဘယ္ရီအရသာနွင့္ စပါကလင္ အရသာ ပံစံနွစ္မ်ိဳးၿဖင့္ေပါင္းစပ္ထား သည့္ အားၿဖည့္အခ်ိဳရည္ၿဖစ္သည္။ ISO HACCpလက္မွတ္မ်ား ရရွိသည္။ vitamin B3,B6,B12 ပါ၀င္ၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းနယ္မူကို ေပ်ာက္ေစၿပီး လန္းဆန္းမူသာမက ခြ
V-Code Can Cafe - 250ml (1 Carton 24pcs)
V-Code Pet Berry - 330ml (1 Carton 12pcs)
V-Code Pet Cafe - 330ml (1 Carton 12pcs)
V-Code Pet Energy - 330ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Orange - 1.5ml (1 Carton 6pcs)
Dpop Lime - 1.5ml (1 Carton 6pcs)
Dpop Cola - 1.5ml (1 Carton 6pcs)
Dpop Orange - 600ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Lime - 600ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Cola - 600ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Orange - 350ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Cola - 350ml (1 Carton 12pcs)
Dpop Can Orange - 330ml (1 Carton 24pcs)
Dpop Can Lime - 330ml (1 Carton 24pcs)
Dpop Can Cola - 330ml (1 Carton 24pcs)
Asia Water - 1liter (1 Carton 6pcs)
Asia Water - 0.6liter (1 Carton 12pcs)
Vito Soy Milk Plain - 125ml (1 Carton 60pcs)
Vito Soy Milk Strawberry - 125ml (1 Carton 60pcs)
Vito Soy Milk Chocolate - 125ml (1 Carton 60pcs)
Vito Soy Milk Strawberry -180ml (1 Carton 48pcs)
Vito Soy Milk Chocolate -180ml (1 Carton 48pcs)